siphithanelwa yikhanda isikhulu sekilabhu ye-psl ngeligi - Ilanga News
Home Ezemidlalo siphithanelwa yikhanda isikhulu sekilabhu ye-psl ngeligi
siphithanelwa yikhanda isikhulu sekilabhu ye-psl ngeligi
SILALA obenyoni isikhulu sekilabhu egijima kwiGladAfrica Championship njengoba simincele ukuthi imidlalo yeligi ingamiswa.
Imidlalo yeligi isiqede inyanga yonke ingagijinywa ngenxa ye-co-ronavirus ehlasele umhlaba wonke.
UMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa unqume ukukumisa ukusebenza ezweni ukuze kunqandwe ukubhebhetheka kwaleli gciwane.
Kuhlukene imibono ngemidlalo yeligi yakuleli njengoba kukhona abathi ayivele iqedwe nje, kuqalwe kabusha uma sekuphele lolu bhubhane.
Kukhona abathi ayigijinywe kodwa kungabi bikho balandeli.
U-Ari Efstathiou ongumnikazi we-Ajax Cape Town eziholayo esicongweni seGladAfrica Championship uthi uvele aphithane ikhanda uma ecabanga ngesimo seligi.
“Isimo esibhekene naso sinzima ngoba abantu bakithi bayafa yingenxa yalolu bhubhane.
“Le nto yenza umuntu angakwazi ukucabanga kahle ngoba siyafisa ukuthi imidlalo yeligi iqhubeke.
“Uma ingamiswa unomphelo angazi ngempela ukuthi ngingenzenjani emuva komsebenzi ongaka esiwenzile ngale sizini.
“Umuntu akalali ucabangana nale nto.
“Akusho ukuthi sesiyithathile iligi kodwa ngiyafisa nje ukuthi imidlalo iqedelwe ukuze kucace konke lokho.
“Sibaningi sisethubeni kodwa uma usesimweni sethu noma kanjani ufisa imidlalo iqedelwe.
“Kodwa-ke sizolinda sibone ukuthi kugcina kanjani, khona kunzima,’’ kusho u-Efstathiou.
Previous articleKuboshwe 50 emshadweni
Next articleuveza okumyisa e-england ufurman